USable Shepherd waseGerman - Umhlahlandlela Wokuzala Ekugcineni - Izinhlobo
USable Shepherd waseGerman - Umhlahlandlela Wokuzala Ekugcineni
I-classic yangempela, i-Sable coloured German Shepherd ingumbala wejazi ovelele kunabo bonke abelusi, kepha yini ebenza bakhetheke kangaka?
Yebo, uSable German Shepherd ukuphela kombala ofanelana nemibono eqinile yelungu elisungula inja wenja eyiMelusi eyiqiniso .
Uhlobo olufanelwe abantu abakhuthele, imibhangqwana noma imindeni, le canine iyinja enkulu futhi ehlakaniphile, ethembekile nenothando.
Lapha sizokwabelana nawe ngesiqondisi sethu sezinja esiphelele, kusuka emlandweni wohlobo nokuziphatha kuze kube yimidlwane nezidingo zokuzivocavoca, uzokwazi ukuqonda ukuthi lolu hlobo lukulungele yini.
Uyini Umalusi Osezingeni Elincane waseJalimane?
I-Sable German Shepherd Puppy
I-Sable German Shepherd Temperament
Usayizi Womalusi WaseJalimane Sable & Ukubukeka
Umhlahlandlela Wokunakekelwa Kwezinja ZaseJalimane
Akuyona imfihlo ukuthi uMalusi waseJalimane udabuka eGermany.
Lolu hlobo oluhlakaniphile noluthembekile lungagunyazwa kuMax von Stephanitz.
Ngo-1899, uVon Stephanitz wahlangana nenja okuthiwa uHektor. Emangele futhi ehlabeke umxhwele ngoHektor, kakhulu, wamamukela eshintsha igama lakhe laba nguHorand von Grafrath.
UVon Stephanitz wasungula iSociety for the German Shepherd inja, ngemuva nje kwalokho wabe eseqala uhlelo lokuzalela.
Ukukhethwa ngokucophelela kwemidlwane emihle kakhulu kwenziwa nguVon Stephanitz nenja yakhe, uHektor wazala imidlwane engama-84.
Kwaze kwaba yiminyaka engamashumi amabili kamuva, ngo-1908 lapho lolu hlobo lwaqashelwa ngokusemthethweni yi-American Kennel Club.
Ekugcineni, ukuthandwa kohlobo kwakhula futhi kwasakazeka emhlabeni wonke.
Uthando lwaseMelika ngenja Izinhlobo zingavunyelwa izinkanyezi zama-movie ezifana ne-Rin Tin Tin.
Kungenzeka futhi ukuthi uke wabona omunye eceleni kukaWill Smith ku- 'I am Legend'.
Namuhla, uMalusi waseJalimane uhlobo lwesibili oludume kakhulu lwezinja e-United States.
Kuyizimpawu zomzimba nezokuziphatha zikaMalusi waseJalimane eziheha abathandi bezinja kule canine.
Ukwethembeka kwabo nobumnene bomusa, kanye nokuzivumelanisa nezimo, kwenza lolu hlobo lube yilungu le-canine elihloniphekile elizokwengeza kunoma yimuphi umndeni.
I-Sable German Shepherd inesimo esihle kakhulu.
I-Sable German Shepherd yaziwa njengenja yokuqala, yabelana nge-DNA impisi yabo okhokho .
Umbala wejazi kuphela ongachezukanga embonweni kaVon Stephanitz.
Ijazi leSable liyisakhi esivelele futhi kwaba owokuqala wezinhlobo ze-German Shepherd.
Ukubukeka kwale canine kuhle, noma kunjalo, imibala eyahlukene yezingubo zikaMalusi ayinamphumela ku-temperament, ezempilo noma ekuziphatheni.
Namuhla, kukhiqizwa izinhlobo ezahlukahlukene zemibala yaseGerman Shepherd kusuka kokumhlophe kuya kokumnyama, futhi-ke, isable yasekuqaleni.
Ithebula lamaqiniso we-Sable German Shepherd
Usayizi Amasentimitha angama-22 kuye kwangama-24 kwabesifazane nama-intshi angama-24 kuya kwangu-26 kwabesilisa
Isisindo I-55 iye ku-73lb yabesifazane kanye nama-75 kuya kuma-95lb kwabesilisa
Isikhathi sokuphila Iminyaka eyi-9 - 13
Uhlobo Lokuzala Ukufuya Ukufuya
Inhloso Inja esebenzayo
Ifanele i- Abantu Abasebenzayo, Izithandani Nemindeni
Umbala Sable, Tan, Gold, Mnyama, Mhlophe, Isibindi, Luhlaza okwesibhakabhaka, iParti, iPanda Noma Inhlanganisela Yanoma Yibaphi Ababili
Isimo Ozethembayo, Onothando, Othembekile, Ovikelayo Nobukhaliphile
Okunye U-Alsatian, uBerger Allemand kanye nenja yaseGerman Shepherd
Le midlwane ikhula ngokushesha futhi ifinyelela ukuvuthwa ngokomzimba ezinyangeni eziyi-18 kuya kwezingama-24.
Njengemidlwane, izindlebe zabo zehlela phansi eceleni kwekhanda labo, kepha njengoba zikhula, izindlebe zazo ziba mpo.
Babuye bathambekele ukukhula kuzo zombili ikhanda nezinyawo .
Ngokwesilinganiso, usayizi kadoti uzungeze imidlwane engu-8 kepha ungahle ube phakathi kuka-5 kuye ku-9.
Imidlwane ehamba phambili ye-Sable German Shepherd imvamisa ibiza phakathi kuka- $ 800 kuye ku- $ 1,500 USD . Lokhu kuncike kozalo lwegazi, inzalo kanye nomfuyi.
Kubalulekile ukwazi umfuyi wakho, umfuyi onolwazi futhi oqinisekisiwe uzohlinzeka abanikazi abasha ngezikolo ze-hip, nomlando wabazali (isb ozalo).
Kufanele futhi uthole umbono omuhle wobuntu bomdlwane wakho ngokuhlangana nabazali bobabili (kepha ubuncane bedamu).
Le canine iyaqhubeka nokufuywa futhi isetshenziswe njengenja esebenzayo enezixhumanisi zamasosha namaphoyisa.
Isimo sabo sinesineke futhi baphendula kahle kumnikazi wabo njengoba bezethemba futhi bezethemba ngokweqile, okwenza babe yizinja ezisebenza kahle kakhulu.
Ukushayela kwabo inyamazane kuphezulu impela, uma kunjalo ukuhlangana kahle futhi kusukela esemncane lapho-ke ngeke zibe khona izinkinga ekuqedeni noma yiziphi izinkinga zokushayela inyamazane.
Lapho usujwayele lolu hlobo lapho-ke uzokuqonda ukuthi banothando futhi banenhliziyo enkulu kangakanani.
Bangakwazi ukwenza izinja eziqaphile kakhulu, zinikeze ukuvikelwa kwabanikazi bazo. Lokhu kuhlanganiswe nokuqeqeshwa kwabo okuphezulu, yikhona okubenza bafiseleke kakhulu emsebenzini ngaphakathi embuthweni wezempi nowamaphoyisa.
Ukuba ngomunye wama-canine ahlakaniphe kakhulu, i-Sable German Shepherd ingaphezu kokukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezimo ezisongelayo nezingasongeli.
Noma kunjalo, kufana ne- Izinja zeRussia Bear , bangaxwaya abantu abangabazi ngakho-ke izingeniso ezifanele zingadingeka.
I-Sable German Shepherd yazalelwa ukusebenza, kepha ubuntu babo bunemvelo enhle.
Njengabo bonke aBelusi, bangachazwa njengabaqotho, abanothando, abakhuthele nabasebenza kanzima. Ukuzimisela kwabo ukusebenza izindlela ezinzima banemvelo enamandla yokujabulisa abanikazi bazo.
Ekuqaleni bakhuliswa ngobuhlakani babo nekhono lokusebenza, abakwaSable German Shepherds banamuhla baphambukile kule nhloso kuphela futhi manje sebekhulisiwe ukuba yilungu lomndeni elivelele nelifuyiwe .
Benza ukwengeza okuhle kakhulu njengelungu elinoboya kunoma yiliphi ikhaya ngenxa yokuqeqeshwa kwabo, ubuntu obunothando, nokwethembeka.
USable Shepherd waseJalimane uzwana kakhulu nezingane. Bangaba nomusa, babe mnene futhi badlale lapho kudingeka.
Uma bethulwe futhi bahlangana nabantu besebancane, khona-ke bangazwana kahle namakati nezinye izilwane.
Sekukonke, banesimo esihle kubo bonke abantu (ngaphandle kwabangenayo) futhi bangajwayela noma iyiphi indlela yokuphila. Bathanda ukuhamba izintaba, amabhishi ngisho nohambo olulula lwepaki yezinja.
Ukuxubha inja yakho ngokungaguquguquki kubalulekile, ikakhulukazi ngezikhathi zokushaywa.
Ihlukaniswe njengohlobo olukhulu lwenja, uSable German Shepherd wesilisa unesisindo esiphakathi kwamakhilogremu angama-75 kuye kwangama-95, lapho insikazi ilula kancane kumakhilogremu angama-55 kuye kwangama-73.
Eyesilisa nayo imi iphakeme, ekuphakameni kwamasentimitha angama-24 kuye kwangama-26 uma iqhathaniswa neyesifazane engamasentimitha angama-22 kuye kwangama-24.
Ngokwakhiwa okuqinile, kwemisipha nokwasubatha, ukubukeka kwazo kuxubene nejazi elinemibala ehlelekile.
Ulayini wabo womzimba uveza isimo se-S lapho uhhafu ophezulu womzimba wabo mude ukwedlula ingemuva labo njengoba bade kunabade.
I-Sable German Shepherd inesifonyo eside esinekhala elimnyama nomhlathi oqinile.
Zinezindlebe eziqondile ezihlala ngaphezulu kogebhezi lwawo oluqinile.
Amehlo abo avame ukuba nsundu ngokunyama. Noma kunjalo, kwesinye isikhathi uMelusi oMhlophe waseJalimane unamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngokomzimba, zinguhlobo oluqinile kakhulu, olubukeka lungaphambukanga kude nokhokho babo bempisi .
Le nja ingeza ngemibala ehlukahlukene efaka:
Imvamisa banemaski emnyama ezungeze amehlo abo, afana noZorro ( okwenzeka ukwenza igama elikhulu le-German Shepherd )!
Lesi buso esimnyama siqukethe uboya obumnyama obutholakala nephethini yesihlalo sehhashi ngemuva kwabo. Lokhu kumaka akutholakali ngokuhlukahluka kombala omnyama .
I-Sable German Shepherd ibonwa njengezinezinhlobonhlobo ezimbili ezahlukahlukene: eziphakathi futhi eside .
Ijazi labo lizoba lukhuni futhi liqonde ngokuthe xaxa.
Ngokwengeziwe, banengubo ephindwe kabili, yilejazi eliphindwe kabili elivumela inja ukuthi ivumelane kahle nenja esebenzayo ezimeni zezulu ezahlukahlukene.
Uhlobo lwengubo oluphakathi luvelele, ngenkathi i- ijazi elide lengubo libuyele emuva .
Umalusi waseJalimane onengubo emaphakathi yiyona kuphela ijazi elimukelwayo ngezinga lokuzala . Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi abelusi abambalwa abade baseJalimane abakhuliswanga, abakwazi nje ukuncintisana!
Ijazi le-canine lizokwehla kaningi. Eqinisweni, zichitha ngokuhambisana nezikhathi ezishintshayo. Ungalindela uboya obuningi besizungeze ikhaya lakho osondela ezinyangeni ezifudumele njengoba umdlwane wakho uchithela ijazi labo lasebusika ukulungiselela ihlobo.
Ukuzilungisa ngalezi zinyanga kungaba lula kwabahlanza indawo. Bazokhipha ngokoqobo uboya obungadingeki.
Zama ukujwayeza umdlwane wakho kokomisa igalelo usemncane uma kungenzeka .
Lapho usuthole umdlwane, ungalindela ukukhipha ngaphezulu kokujwayelekile.
Ukugeza umalusi wakho waseJalimane kufanele kwenziwe kuphela uma kunesidingo. Ngokwesibonelo; uma benquma ukuthi kuwumqondo omuhle ukugcobhoza odakeni, noma ukugoqa ekukhipheni komngane wabo.
Kodwa-ke, ukugeza okungadingekile kungacasula isikhumba somdlwane wakho njengoba uzobaphuca uboya babo ngamafutha aso emvelo.
Ukuxubha amazinyo akho e-canine kubaluleke ngokulinganayo. Amathambo ayindlela enhle yokuhlubula amazinyo awo oqwembe olungadingeki.
Le nja yezinja ingaba uhlobo lokudlala kakhulu.
Baziwa njengohlobo oluhlakaniphile, olusebenzayo nolwezemidlalo, kulula ukuluqeqesha kepha kusadinga inani elikhulu lokuzivocavoca ngosuku.
Lesi isizukulwane esifanele abantu abakhuthele, imibhangqwana kanye nemindeni, kepha ngenxa yezidingo zabo eziphakeme zomzimba nezengqondo, azifanele abantu asebekhulile.
Umhlahlandlela Ama-calories angu-1,600
I-Sable German Shepherd idinga ukudla okusezingeni eliphakeme okunothe ngamaprotheni. Lolu wuhlobo lwezemidlalo nolusebenzayo ngakho-ke ukudla kwabo kudinga ukubanikeza amandla abalulekile.
Inketho ethandwayo yale nja kungukudla okususelwa enyameni eluhlaza .
Kodwa-ke, okunye ukudla okuluhlaza akuhlinzeki inja ngamavithamini namaminerali abalulekile ngakho-ke ukwesekwa nokubonisana ngokudla nodokotela wezilwane kubalulekile.
Uma ukhetha ukudla okunomsoco noma okomile, ngakho-ke kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi lokhu kudla kuyikho ngokuhambisana nemithetho ye-AAFCO .
Njengemidlwane, kufanele wondle i-pooch yakho kabili noma kathathu ngosuku. Kodwa-ke, njengoba bekhula futhi beba ngabantu abadala ukudla kabili ngosuku kulungile.
Amaminithi Imizuzu eyi-120
I-Sable German Shepherd yenza umlingani osebenza kahle kakhulu.
Kodwa-ke, ungalindeli ukuthi bazoba ngu-Usain Bolt ngokushesha! Njengemidlwane, uMelusi wakho ngeke esakwazi ukusebenza isikhathi eside (ukwenza kanjalo kuzodala izinkinga ezihlangene ezingafuneki njengabantu abadala).
Uma selukhulile futhi lukwazi, lolu hlobo luthanda ukuya ekugijimeni kwansuku zonke.
Yethula injana yakho ukubhukuda lapho ukholwa ukuthi isilungile. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuzulazula echibini, emfuleni noma echibini ngokuzethemba.
Khumbula, ukuzivocavoca umzimba kufaka noma yiluphi uhlobo lomsebenzi wokushisa amandla ngakho nesikhathi sokudlala siyabala naso.
Sincoma ukuthenga amanye amathoyizi, qala ngebhola lethenisi kanye ne-frisbee.
Ukuqeqesha umdlwane wakho kufanele kuqale ngokushesha okukhulu. Ngisho kusukela esemncane, bangabafundi abasheshayo abangathandi lutho ngaphandle kokukujabulisa.
Ukubaluleka kokuxhumana kahle nabantu ayikwazi ukugcizelelwa ngokwanele. I-Sable German Shepherd idinga ukuhlangana okungaguquguquki futhi kwasekuqaleni ngezindawo ezahlukahlukene, abantu, nezilwane.
Akumangazi ukuthi uhlobo lweSable German Shepherd kulula ukuluqeqesha.
Lesi yisizukulwane esaziwa ngamakhono abo okusebenza nobuhlakani.
Izindlela eziqinile zokuqinisa ezamanje indinganiso yegolide yokuqeqeshwa kwama-canines . Ukusetshenziswa kwemivuzo (amathoyizi noma ukudla) kuhlanganiswe nokudumisa, kuyindlela engcono kakhulu yokuqeqesha.
Eqinisweni, abaqeqeshi bezinja zamaphoyisa basebenzisa amathoyizi njengendlela ejwayelekile yomvuzo wabo bonke abaqeqeshi bokuqinisa ukuqiniswa komdlwane waseJalimane.
Ngoba iSable German Shepherd iyinja ehlakaniphile nenelukuluku lokwazi, ukukhuthazeka kwengqondo kuyisidingo.
Lokhu kungenziwa ngokuhlanganisa inja yakho nezindawo eziguqukayo nezingafani.
Imidlalo futhi iyindlela enhle yokuvuselela ngokwengqondo uMalusi wakho.
Lolu hlobo lwenza kahle emidlalweni efana nokulanda, ukudonsisana kanye nokufihla ukufuna! Banekhala elibukhali ngakho ukufihla ukuphatha namathoyizi nakho kuwumqondo omuhle.
I-Sable German Shepherd ibhekwe ngofuzo ukuthi ibhekane nezinkinga zezempilo okungenzeka kube umphumela wokuzala ngesikhathi sokuqalwa kwalolu hlobo.
Inkinga eyodwa ejwayelekile yezempilo yoMalusi waseJalimane Uhlobo yi-hip dysplasia .
I-hip dysplasia yisifo lapho kukhona ukwakheka okungahambi kahle kokuhlangana kwebhola lesokhethi nesokhethi.
Ngoba i-hip dysplasia yisimo esizuzwe njengefa - kuningi kuphela okungenziwa ukugwema lesi sifo.
Kodwa-ke, imvelo ye-puppy yakho ingase ibe nzima noma isheshise ukukhula kwesifo.
I-Sable German Shepherd ingu uhlobo lwezinja zakudala futhi ukuhlukahluka kombala okuhlale eduze kakhulu nohlobo lwangempela.
Lolu hlobo lwaziwa ngokuzethemba, ukuvikela, ukukhalipha, ukuthanda nokuthembeka - ukukwenza umngane ophelele kunoma ngubani osebenzayo futhi ozimisele ukunikela ngesikhathi sakhe kule canine.
Ukukhathalela izingane, umlingani osebenzayo osebenzayo kanye ne-sidekick eqotho kakhulu, akukho lutho olubi olungakusho ngalolu hlobo inqobo nje uma luqeqeshiwe futhi luhlangana kahle nabantu.
Uma unesikhathi sabo, nabo bazoba nesikhathi sakho.
I-Cavalier King Charles Spaniel: Okudingayo ukwazi
Izinja Zokuxubana Zomalusi wase-Australia: Izinhlobo ezi-9 ezihamba phambili ze-Aussie Shepherd Cross
i-aussie Shepherd blue heeler mix
Umdlwane wami uzoba mkhulu kangakanani?
I-shih tzu yorkie mix igcwele ngokugcwele
inja ibamba ngaso sonke isikhathi
amagama ezinja ze-irish zabesifazane